Taadka dabaylaha ee isbedbeddelaya: waa maxay, sifooyinka iyo isticmaalkiisa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta biyaha badda
Adduunkan aan maanta ku nool nahay, soo saar koronto ayaa aad muhiim ugu ah, marka waxaan isku halleyn karnaa ilaha kala duwan ee tamarta. Si kastaba ha noqotee, bani'aadamku wuxuu si ballaaran u kobcinayaa ilo kooban oo kooban oo looga faa'iideysan karo iyadoo la adeegsanayo kheyraad aan la cusbooneysiin karin. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay aqoonta liidata ee fursadaha ugu fiican ee abuurka noocyada kale ee tamarta iyo maalgashi la'aanta teknoolojiyada lagama maarmaanka u ah horumarka. Waxaan ka hadlaynaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Mid ka mid ah ayaa ah firfircoonida tamarta.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha iyo muhiimadda tamarta firfircoon ee firfircoon.
1 Muuqaalka tamarta
2 Tamarta biyaha badda
3 Tamarta qulqulka
4 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka tamarta qulqulaya
Saliida ayaa hada ah isha ugu weyn ee laga helo tamarta waxaana u isticmaali karnaa sameynta shidaal iyo iskudhafyo waxtar u leh nolol maalmeedka. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay khasaaro daran: waa ilo aan dib loo cusboonaysiin karin. Waxaa laga helaa dhagyo dabiici ah oo duug ah, meesha noocyada dhirta iyo xayawaanka ayaa noolaa kumanaan sano ka hor ama ka badan. Sababtaas awgeed, adeegsiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ka helaysaa fiiro gaar ah aqoonyahannada caanka ah, injineerada iyo shirkadaha.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waa tamar laga helo kheyraadka si sahal ah dib loogu isticmaali karo oo aan ku yarayn karin horumarka joogtada ah awgood. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo noocyadan kheyraadka ah oo soo saari kara tamar nadiif ah iyadoon laga walwalin wasakhda wasakheynta ama kharashka badan
Xulashada xiisaha lihi waa awoodda mawjadaha, taas oo lagu gaari karo iyadoo la adeegsado dhaqdhaqaaqa mawjadaha si loo dhaliyo koronto hab nabdoon oo la cusboonaysiin karo. Sida tamarta kale, waxay u baahan tahay nooc gaar ah oo tiknoolajiyad ah iyo mid ka mid ah hababka lagu helo.
Adiga oo aan cunin walxaha fosil ama soo saarista gaasaska wax ka geysta saameynta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa loo arkaa il tamar nadiif ah oo dib loo cusboonaysiin karo. Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah saadis la saadaalin karo oo aamin ah oo ay weheliso awood aan si weyn u beddelmin sannad illaa sannadka, laakiin kaliya wareegyada mawjadaha iyo mawjadaha.
Ku rakibida tamarta noocan ah ayaa lagu fuliyaa webiyada dhaadheer, afka, estuaries iyo badda dhexdeeda iyadoo la adeegsanayo qulqulka badda. Ka-qaybgalayaasha saameyntani waa qorraxda, dayaxa iyo dhulka. Dayaxa ayaa ugu muhiimsan ficilkan maxaa yeelay waa midka dhaliya soo jiidashada. Dayaxa iyo dhulku waxay sameeyaan xoog soo jiita walxaha xaggooda: cuf isjiidadkaas ayaa sababa in dayaxa iyo dhulku midba midka kale soo jiito oo uu isku qabto.
Maaddaama ay u dhowdahay cufku, xoogga weyn ee cuf isjiidashada, jiididda dayaxa ee dhulka ayaa ka xoog badan aagga ugu dhow marka loo eego aagga ugu fog. Soo jiidan la'aanta dayaxa ee dhulka ayaa sabab u ah hirarka badda. Maaddaama dhulku uu adag yahay, soo jiidashada dayaxa ayaa saamayn weyn ku leh biyaha marka loo eego kuwa qaaradaha, sidaa darteed biyuhu si weyn ayey isu beddeli doonaan iyadoo ku xiran hadba u dhawaanshaha dayaxa.
Waxaa jira 3 hab oo loo adeegsado soo saarista korontada. Waxaan u sharaxeynaa labada hore ee kore waxaanan diiradda saareynaa midkood si qoto dheer.
Kuwani waa labada nooc ee ugu horreeya jiilka tamarta qulqulaya:
Qalabka korontada dhaliya: Matoorrada Tidal ee hadda shaqeeya waxay isticmaalaan tamarta dareeraha ah ee biyaha qulqulaya si ay u kaxeeyaan marawaxadaha, oo lamid ah dabaysha (hawada qulqulaya) ee ay isticmaalaan marawaxadaha dabayshu Marka la barbardhigo biyo xireennada daadadka wata, qaabkani waa ka qaalisan yahay oo saameyn yar oo xagga deegaanka ah ayuu ku leeyahay, waana sababtaas tan ugu sii kordheysa.
Biyo xireenka: Biyo xireennada 'Biyo-xireennada' waxay isticmaalaan tamarta suuragalka ah ee ku jirta farqiga dhererka (ama madaxa luminta) inta u dhexeysa hirarka sare iyo hirarka hoose. Biyo-xireenku asal ahaan waa biyo-xireen dhinaca kale ee daarta, oo ay saameeyeen kharashka badan ee kaabayaasha bulshada, yaraanta goobaha laga heli karo adduunka oo dhan, iyo dhibaatooyinka deegaanka.
Haatan waxaan ku sifeyneynaa qaabka jiilka iyada oo loo marayo tamarta firfircoon ee firfircoon. Waa teknolojiyad jiil teori ah oo adeegsata isdhexgalka ka dhexeeya tamarta firfircoonida iyo tamarta ka iman karta xilliyada qulqulka. Waxaa la soo jeediyay in la dhiso biyo xireeno aad u dhaadheer (tusaale ahaan, 30 ilaa 50 kiiloomitir oo dherer ah) min xeebta ilaa badda ama badweynta, iyadoon la xadaynayn aag. Biyo xireenka ayaa soo bandhigaya kala duwanaanshaha wejiga, oo sababaya kala duwanaansho heer sare ah oo biyo ah (ugu yaraan 2-3 mitir) oo ku teedsan wabiyada gacmeed halkaas oo hirarku ay is barbar socdaan xeebta, sida kuwa laga helo Boqortooyada Ingiriiska, Shiinaha iyo Kuuriyada Koofureed. Awoodda dhalinta korontada ee biyo xireen kasta wuxuu u dhexeeyaa 6 iyo 17 GW.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka tamarta qulqulaya
Faa'iidada tamartaan ayaa ah inaysan jirin wax ceyriin ah oo la cuni karo gabi ahaanba, maadaama mowjaddu ay tahay mid aan dhammaad lahayn oo aan laga maarmi karin aadanaha. Tani waxay ka dhigeysaa tamar daad leh tamar dhaqaale oo aan la koobi karin lana cusboonaysiin karo. Dhinaca kale, ma soo saarto waxyaabo kiimiko ah ama sun ah, baabi'intoodu uma baahna dadaal dheeri ah, sida plutonium-ka shucaaca ah ee ay soo saarto tamarta nukliyeerka ama gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ay sii daayaan gubidda fosil hydrocarbons.
Faa’iido darrada ugu weyn ee noocan ah tamarta waa waxtarka hooseeya. Xaaladaha ku habboon awgood waxay awood u yeelan kartaa boqollaal kun oo guryo ah. Si kastaba ha noqotee, maalgashiga weyn ayaa leh saameyn aad u xun ku leh muuqaalka iyo deegaanka maxaa yeelay nidaamka deegaanka badda waa inuu si toos ah u farageliyaa. Tani waxay ka dhigeysaa xiriirka ka dhexeeya kharashka warshadda wax soo saarka, burburka deegaanka iyo xaddiga tamarta la heli karo aan faa'iido badan lahayn.
Tamarta daadka waxaa loo isticmaalaa isha korantada ee magaalooyinka yar yar ama xarumaha warshadaha. Korantadan waxaa loo isticmaali karaa in lagu iftiimiyo, lagu kululeeyo ama lagu dhaqaajiyo habab kala duwan. Sidoo kale waa inaan maanka ku hayaa in dhammaan meelaha adduunka ee mawjadaha ku wada jiraa aysan isku awood ahayn.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan tamarta qulqulaya iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Tamarta qulqulka
Fikradaha qurxinta dhalooyinka